दुबइमा नग्न पोज दिने ४० महिलाहरुबारे खुलासा, उनीहरु को थिए ? किन र कहाँबाट आए ? – Dcnepal
प्रकाशित : २०७७ चैत २४ गते ११:०८
काठमाडौं। दुबइमा बाल्कोनीमा नग्न पोज दिने महिलाहरु सबै मोडल भएको र उनीहरुमध्ये धेरैजसो युक्रेनका भएको खुलासा भएको छ । यससँगै यसअघि समाचारमा आएजस्तो उनीहरु १२ जना नभइ ४० जना थिए । यी मोडलहरु सोभियत युनियनबाट टुक्रिएका देशहरु रुस, बेलारुस र मोल्दोभाका थिए तर तीमध्ये ११ जना युक्रेनका भएको त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले पुष्टि गरेको डेलीमेलले जनाएको छ ।